Ndị na-emepụta ihe ọkụ ọkụ na ndị na-enye ihe ntanetị - China Factory Lighting Factory
Kacha ọrịre Nkwado Ahịa Mobile App Control Dugara warara Light Waterproof
Ọkụ ọkụ maka ime ụlọ agba dị ezigbo mkpa maka mmepe uche nke ụmụaka dị ka nyocha na-egosi na agba na-arụ ọrụ dị mkpa na ụmụaka IQ, EQ na ụdị mmadụ. Ime ụlọ theorychọ Mma Uche na-egosi na agba nwere nnukwu mmetụta na mmepe nke mmetụta uche ndị mmadụ. Colorsdị dị iche iche na-enye ndị mmadụ mmetụta uche dị iche iche ma nwee mmetụta dị iche na ahụike ndị mmadụ. Dorm ndozi Chepụta ụcha agba nke gị ma kwe ka ọ wetara gị obi ụtọ ma mee ka ike gwụ gị ...
High Quality Product Energy Conservation and Environmental Protection Dugara Light warara Waterproof
Ultra-long led light strips for home Cozylady, ụlọ ọrụ mbụ nke mbụ iji nweta ihe ọgbara ọhụrụ na teknụzụ na eriri ọkụ 12v karịrị 15m, ka mma mma ezinụlọ. Anyị nwere afọ 20 nke ọkaibe ahụmahụ na ngwaahịa imewe na n'ichepụta. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ọhụrụ na elu mma. Ngwaahịa anyị emeela ọtụtụ usoro nyocha tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe iji hụ na ogo na ụkpụrụ nchekwa maka afọ ojuju na ntụkwasị obi gị. Wifi ìhè warara si nanị fe ...
Factory Direct Sale High Quality Mobile App Remote Control On Ma Off Profaịlụ Light Dugara warara
【Ikanam warara ga-ada?】 Dị ka n'ji nzaghachi, anyị na-adịbeghị anya mere mkpa mgbanwe- thermal conductive nrapado update. Dika iji oge na abawanye, viscosity na abawanye. Mana agbanyeghị ka nrapado ahụ si dị mma, ọkụ ọkụ 20m karịrị nha na ibu dị egwu, yabụ anyị na-akwadebe ngwa mgbakwunye iji dozie nsogbu nke ọkụ ọkụ ọkụ na-ada. Anyị nkwa: Ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ ọzọ 3M teepu ngwa, biko kpọtụrụ anyị ahịa ọrụ. 【...
Orylọ ọrụ na-ere ahịa dị elu na-akwado ọtụtụ ekwentị mkpanaaka na-achịkwa Bluetooth Ikanam Light Light
Mekọrịta na egwu egwu egwu egwu egwu, etinyere igwe okwu dị nro, agba gbanwere na-akpaghị aka dabere na egwu egwu / ụda ihere. Ibido otu egwu a site na ọkụ warara a. Ọ nwere ike ịmepụta mmekọrịta ịhụnanya, ọmarịcha, ihe na-atọ ụtọ, ikuku anwansi maka oriri na ọ .ụ yourụ gị. Nke a ga - eme ka oge oriri gị ghara ichefu. Nwee mmemme ngosi gị na ọtụtụ nde agba. Wide Ngwa A na-emepụta ọkụ ndị a na-enweghị mmiri maka ime ụlọ na ime ụlọ mma. Enwere ike iji ya rụọ ọrụ ọ bụla, nweta ...
Kacha ọrịre Nkwado Ahịa Mobile App Remote Control On Ma Gbanyụọ ọkụ ọkụ warara ọkụ
Smareal 50FT / 15M LED Strip Lights na-eweta oriri gị na-ahụ anya Ndụ chọrọ mmetụta nke ememe, ọkụ na-acha ọkụ na-eme ka ndụ gị nwee mmekọrịta na-atọ ụtọ. ị nwere ike ịgbanwe ụlọ n'ime ụdị dị iche iche. Ka anyị mikpuo onwe gị kpamkpam na-ekpo ọkụ, dị mma. Ọkụ ọkụ ndị ahụ dị mma maka kichin, ụlọ ihi ụra, ihe nkiri TV light ezumike, ma ọ bụ mmemme ezinụlọ. Ọ bụ nnukwu onyinye maka ezinụlọ na ndị enyi gị. Ebe nchekwa na ngụ oge Ọrụ Ikanam ìhè warara nwere ebe nchekwa ọrụ, ọ nwere ike icheta ọnọdụ ị tinyeburu na sma na sma ...
High Quality Product Mobile App Remote Control On Ma Off Mere warara ọkụ Remote Control
Oge ọkụ ọkụ ọkụ, can nwere ike idozi ọkụ na-enwupụta ọkụ iji daba ebe dị iche iche, Ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ nwere ọrụ nchekwa, mgbe a na-ejikwa eriri ahụ ọzọ, ha na-echeta ntọala ọnọdụ ikpeazụ na-enweghị ntọala ọzọ, ya na smart App, ị nwere ike ịnweta arụ ọrụ oge, gbanye ma gbanyụọ na oge atọrọ, enwere ike ịhọrọ 28 Dynamic Modes, ị nwekwara ike Diy agba gị pụrụ iche Otutu Ebe ị ga-enweta, A ga-eji eriri nwere ike iji chọọ ụlọ iri nri gị, ime ụlọ, ụlọ elu, ihe owuwu ụzọ mbata. ..
Ezigbo Ahịa Ezi Elu Energy Conservation Na Environmental Protection Wifi warara Light
Mee ọ bụla na Nkuku ọ bụla na-erute ebe ọ bụla n’ụlọ gị nwere eriri ọkụ 32.8ft. Mee ka otutu ime ụlọ na-enwu gbaa n'otu oge. Mgbe mkpa fumble na ihe ị chọrọ n'ọchịchịrị. Modekpụrụ Egwuregwu Egwuregwu Ejikọtara ọnụ ụzọ ọkụ ọkụ Alexa gị yana egwu kachasị amasị gị maka ahụmịhe dị egwu karị. Biri oriri ahụ na-atọ ụtọ ma ọ bụ nwee ọnọdụ dị nro, na-atọkwu ụtọ jụụ n'ọnọdụ dị jụụ. Na-eri nri na Cozy Ambiance Nnukwu mgbanwe na-eme ka ọ bụrụ ikuku maka ntọala akuku. Nwee nnukwu nri ma f ...
Ezigbo ọnụahịa Ezigbo Ogologo Ngwa Nweta Ntanetị Led Strip Light Flexible
Nhọrọ Njikwa Atọ: Jikwaa ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ gị na Govee Home ngwa, onye na-ahụ maka ime ihe, ma ọ bụ igbe nchịkwa. Ngwa Govee Home na-enye gị ohere ịnweta ihe karịrị agba agba 16, ụdị ọnọdụ 64, yana atụmatụ ndị ọzọ. Egwu Egwu Elu: Ekele maka igwe okwu etinyere n'ime ya, ị nwere ike ịmekọrịta ụdị egwu dị iche iche na ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ. Bịanụ oriri na nkwari akụ gị ma ọ bụ zuru ike nwayọ nwayọ. Smart Agba :mata: The smart agba buru atụmatụ na-enye ohere nke ...
Factory Direct Sale High Quality timing Function Smart Led Lights warara
Ebe a na-eri nri na Cozy Ambience ụkwụ 16.4 dabara adaba na tebụl kichin gị. Nwee ezigbo nri na ezigbo mmanya na gburugburu izu ike. Icho mma Ime Ime Kemeghi nchapụta na multiple agba-enyere gị aka diy ka ị na-amasị. Mee oku ma dozie agba kachasị amasị site na njikwa dịpụrụ adịpụ ma ọ bụ ngwa ụlọ Govee. Jiri oge gị na-ekpori ndụ. Oge Oriri Tụgharịa egwu mgbe mmemme gị bidoro. Soro ndị enyi gị gbaa egwu na ọnọdụ dị ike ma ọ bụ nke dị jụụ na agba ọkụ dị egwu. Enyemaka Enyemaka Dị Mma: Nye gị ike ...
Ọnụahịa Nkwalite Kachasị Ahịa Na-akwado Ọtụtụ Njikwa ekwentị Ekwentị Led Rgb Strip Light
Atọ Njikwa: Were akara nke ọkụ ọkụ gị na ngwa Govee Home, igbe dị, ma ọ bụ igbe nchịkwa. Site na njikọ njikọta nke Bluetooth, ị nwere ike ịgbanwe agba, gbanye ọkụ ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ, ma ọ bụ dozie nchapụta n'ime njikwa njikwa 10m / 32.8ft. Mee Egwú Gị Dị Mkpa: Igwe arụnyere n’ime, nke nwere mmetụ na-enye gị ohere ịmekọrịta ọkụ ọkụ ọkụ na egwu kachasị amasị gị. Inwe oriri na ngwụcha izu? Jazz ya na ọkụ na-agbanwe agba na-agba egwu na ụda egwu ọ bụla. Hazie Lighting gị: Site N'onwe Gị, v ...
Kasị Mma Nkwado Ahịa Energy Conservation Ma Environmental Protection Smart Mere warara ọkụ
16.4ft Rgb Led Strip Light SMD: 5050 150 leds Agba: RGB 5050 N'onwe Gị Ogologo: 1 * 5meters / 1 * 16.4ft Waterproof: Enweghị SGS US Asambodo nweta nkwalite 24 Key IR Remote Control Mini njikwa 24 igodo ime akara anya: <8M ( ga-atụgharị uche na Obere ihe nnabata na-enweghị mgbochi ọ bụla) 12V Ihe nkwụnye nkwụnye nchekwa: 100-240V Nrụpụta: Ntinye DC12V / 2A UL & FCC Asambodo 5050 Agba Mee N'onwe Gị Ọrụ Agba agba gbanwere ọkụ warara na iche iche R / G / B agwakọtara, Ọ kachasị nkwado 5050 Mee N'onwe Gị agba. Mgbe ole ...
Ezigbo Ahịa Ezi Elu Energy Conservation Na Environmental Protection Waterproof Dugara warara Light
All nke anyị ngwaahịa e mere site anyị mmepe otu na anyị nwere anyị onwe anyị factory. Ebumnuche anyị inye ngwaahịa dị mma na ahụmịhe ịzụ ahịa kacha mma maka ndị ahịa. Nke a RGB ikanam warara bụ ọhụrụ anyị ngwaahịa, ya nwere pụrụ iche ngbanwe mmemme ngwa. Ọ na-abịa na 4096 DIY agba, 16 ọkwa nchapụta kemeghi na ọnọdụ 6 na-egbu maramara. Ihe bụ ihe ọzọ, Sra mode, a nke ọma-e a rgb warara, mgbe ị pịa ụra mode button, ìhè turnto oroma ìhè nwere ike inyere sl ...